Ndị a bụ uwe ọhụrụ Nike na mgbawa NFC | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ uwe ọhụrụ Nike nwere mgbawa NFC
Nkà na ụzụ NFC nọnyeere anyị ruo ọtụtụ afọ, na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-eme omume na-akpaghị aka. N'ihi ihe mgbawa NFC, anyị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, laa n'ụlọ ma weta mgbawa ahụ nso na ama anyị, gbanwee ntọala maka ama anyị, banye jụụ, gbanyụọ njikọ data wee bido ịkpọ egwu. Mgbe anyị hapụrụ ụlọ, anyị nwere ike ịnweta mgbawa NFC ọzọ ka ọ bụrụ na mgbe ewetara ya nso ọ na-eme ka data ahụ rụọ ọrụ, deactivates the nkịtị ma na-agba Google Maps ịmara n'oge niile steeti okporo ụzọ na ụzọ nke kachasị mma iji nweta gaa ebe ọrụ anyị.
Nike ka gosipụtara uwe elu ọhụrụ nwere mgbawa NFC, mgbawa na mgbe anyị na-eweta ngwa gam akporo anyị na onye na-agụ NFC ma ọ bụ site na iPhone 7, na-egosi anyị na akpaghị aka ọdịnaya niile metụtara otu anyị dịka nhazi ọkwa, akụkọ, vidiyo, egwuregwu na-abịa. , ihe omume. Jlọ ọrụ a na - arụ ọrụ na ngwa NBA ejikọtara ọnụ onye Nike jikọrọ aka wepụta ụdị uwe a ọhụrụ lHa ga-eti ahịa ahụ na Septemba 29, ọ ga-adịrị ndị otu niile so na NBA.
Emere mgbawa a ka ọ bụrụ na mgbe a na-asacha uwe ahụ ugboro ugboro ọ gaghị emebi ma ọ bụ kwụsị ọrụ. Banyere ọnụahịa nke uwe ndị a na NBA ejikọtara na teknụzụ, ụlọ ọrụ ahụ emeghị ka ọ mara maka ya, mana na-eche na ọnụahịa nke ibe ndị a dị ọnụ ala, ọnụahịa ikpeazụ ha ekwesịghị ịbawanye nke ọma, n'agbanyeghị na ihe efu nke ịgbakwunye teknụzụ na-acha ọcha. nwere ike ịbụ karịa ihe ziri ezi maka Nike iji mee ka ọnụahịa nke ndị jikọtara ọnụ na ndị ọrụ dị njikere ịkwụ ụgwọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ndị a bụ uwe ọhụrụ Nike nwere mgbawa NFC
CCleaner oria na Trojan, melite ugbu a iji wepu ya